प्रदीप ज्ञवाली जस्तै अन्य मन्त्रीरुको पनि सार्वजनिक होला सम्पत्ति विवरण ? « News24 : Premium News Channel
प्रदीप ज्ञवाली जस्तै अन्य मन्त्रीरुको पनि सार्वजनिक होला सम्पत्ति विवरण ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेपछि नेकपा एमालेका धेरै मन्त्रीहरु बाहिरिएका छन् । ओली सरकारमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली पनि बाहिरिएका छन् ।
ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका अन्य मन्त्रीको बहिर्गमनलाई धेरैले चासो दिएका छैनन् । तर, ज्ञवाली भने मन्त्रीबाट बाहिरिसक्दा पनि धेरैको चासोमा छन् । नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा खड्किइरहने विषय पारदर्शीता हो ।
कुनै पनि सार्वजनिक पद धारणा गर्दा र बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनैपर्छ । तर, विडम्बना नेपालमा सकभर सम्पत्ति विवरण नै नबुझाउने र बुझाउँदा पनि नक्कली विवरण बुझाउने चलन ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।
केही समय अघि तत्कालीन सन्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सम्पत्ति विवरणमा ‘सामसुङको आइफोन’ उल्लेख गरेको घटना होस वा ठूला व्यापारी भन्दा सयलको जीवन बाँचिरहेका पुष्पकमल दाहालले बुझाएको सम्पत्ति विवरण ।
वा, कांग्रेस, एमाले, माओवादी र जसपाका नेताहरुले मन्त्री बन्दा बुझाउने विवरण नागरिकले खासै पत्याइरहेका भने छैनन् । दाइजो प्रथाको धुरन्धर विरोध गर्ने नेताहरुनै सयौं तोला सुन र जग्गाजमीन दाइजोमा प्राप्त भएको सगर्व सम्पत्ति विवरणमै उल्लेख गर्ने गर्छन् ।
शुक्रबार सरकारबाट धेरै मन्त्री बाहिरिएपनि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले मात्र पदबाट हट्नासाथ आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरे । सामाजिक सञ्जालमार्फत् ज्ञवालीले सवा तीन वर्ष मन्त्री रहँदा विदेश भ्रमण बापतको लेभी ३ लाख १४ हजार र पारिश्रमिक बापतको लेभी ६ लाख २० हजार गरी जम्मा ९ लाख ३४ हजार ९३० पार्टी खातामा जम्मा गरेको बताएका छन् ।
पारिश्रमिकको कर कट्टी बापत ३ लाख ७२ हजार ८ सय ९१ रुपैयाँ सरकारी कोषमा दाखिल भएको उल्लेख गरेका छन् । यसबाहेक आफ्नो बैंक खातामा सात लाख ४१ हजार ७ सय ७५ बचत रहेको र मन्त्री हुँदा दुई सय जति पुस्तक थपिनु बाहेक सम्पत्ति विवरणमा कुनै फेरबदल नभएको ज्ञवालीले प्रष्ट पारेका छन् ।
मन्त्रीबाट हटेलगत्तै मन्त्रीको सरकारी निवासबाट शनिवार बाहिरिएका छन् । तर, पद गइसक्दा पनि ओली नेतृत्वकै सरकारका मन्त्रीहरु रामबहादुर थापा,लेखराज भट्ट, टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणी थापा, दावा लामा र गौरीशंकर चौधरीले मन्त्री क्वार्टर छाडेनन् । सम्भावना बोकेका र पारदर्श ठानिएका नेताहरु योगेश भट्टराई र घनश्याम भुषाल पनि मन्त्रीबाट बाहिरिँदा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
उसो त प्रधानमन्त्र ओलीकै यो ३ वर्षको अवधिमा कति कमाई भयो विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन । ओली नेतृत्वकै सरकारमा यसअघि पुनर्गठित मन्त्रिमण्डलका १२ मन्त्रीको सम्पत्ति विवरण दुई महिना वितिसक्दा पनि सार्वजनिक भएन ।
त्यस्तै, अन्य मन्त्रीहरुको पनि विवरण प्राप्त भएको भनिएपनि लामो समय विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमै थन्किएको थियो । गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनको ५ दिनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले १ राज्यमन्त्रीसहित ११ जनालाई मन्त्री बनाए । उनीहरुले मन्त्री पद सम्हालेको ३ महिनासम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन् ।
त्यसरी सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा तत्कालिन उर्जा टोपबहादुर रायमाझी, अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, सहरी विकास मन्त्री प्रभु शाह, खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापा, श्रम मन्त्री गौरीशंकर चौधरी, कानून मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, सामान्य प्रशासन मन्त्री गणेशसिंह ठगुन्ना, वनमन्त्री प्रेमबहादुर आले, महिला मन्त्री जुली कुमारी महतो, युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा तामाङ र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री विमला बिक थिए ।
मन्त्री पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्रै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ ।